Yedo iyo Yoda: Nolol ama Bisu, oo sidoo kale loo yaqaan Aha, wuxuu ahaa ilaahii hore ee Afrika, oo ah xeelad adag, wuxuu ahaa labadaba xigmad xigmad iyo dagaalyahan aan muqadas ahayn
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 24, 2019 00: 30 No Comments
Bisu waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay ilaah dagaal, laakiin isla waqtigaasna wuxuu ahaa ilaaliye dhalmada iyo ilaaliyaha guryaha, iyadoo lala xidhiidho kaftanka, muusikada iyo qoob ka ciyaarka.
Ahaa Waxaa sidoo kale loo arkaa inuu yahay ilaaliye boqorada, sidaa darteed wuxuu caan ku noqday bulshada dhexdeeda maxaa yeelay wuxuu markii hore ilaaliyay Haweenka iyo Caruurta Dhamaan kuwa kale.
Bes ma lahayn macbudyo mana jirin wadaaddo magacyadiisa loo magacaabay, maadaama la rumeysan yahay inuu ku nool yahay kaymaha iyo meelaha qoyan, si kastaba ha noqotee, wuxuu ka mid ahaa ilaahyada ugu caansan pantheon-ka Afrika. waxaa badanaa lagu muujiyey alaabada guriga sida alaabta guryaha, muraayadaha, weelka la isku qurxiyo, gacanta mindida iyo sidoo kale sixir bararka.
Muddo kadib Bisu waxaa loo arkay inuu yahay horyaalaha wax kasta oo wanaagsan iyo cadowga wax kasta oo shar ah, waana sababtaas markii hore loogu yaqaanay "Aha" oo macnaheedu yahay "Dagaalyahan" Sababtoo ah wuxuu ku gacan yareyn karaa bears, libaaxyada ama abeesooyinka gacmihiisa, tani waa sababta, mararka qaarkood waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay cabsi badan xitaa haddii aan marna loo tixgelin inuu shar yahay.
Ahaa Taas bedelkeeda, wuxuu ahaa qayb ka mid ah Ra, kaasoo ka ilaaliyay cadaawayaashiisa dhulka sidaas darteedna wuxuu noqday ilaahnimada boqorka iyo dadkiisaba kana soo horjeestaan ​​xoogagga sharka.
Ka bax inta badan waxaa lagu sawiray mindiyo rajadii laga qabay in ilaalinteeda ay u fidiso weelka xididka waxaana inta badan lagu arkaa da 'yarta Heru si loo ilaaliyo.
Yoda waa sayid caan ah Jedi khabiir ku ah seefta yar.
À Kemet « Ka bax »: wuxuu ahaa mid da 'weyn Neter ee dagaalkii yaraa ee keenay ilaalinteeda kii waday Blade.
Yoda wuxuu ka mid ahaa ayeeyadii golaha ee Jedi, oo ahaa taliye guud isla markaana ahaa maamulaha tababbarka Luukos Skywalker (kan jannada ku socda).
Ka bax Gaar ahaan wuxuu ahaa ilaaliyaha Haweenka iyo Caruurta oo badanaa wakiil ka ahaa da 'yarta Heru (kan jannada ku jira) si loo ilaaliyo oo loo tababaro.
Ka bax ilaaliyo Heru caruurnimadiisii ​​markii uu ku dhuumanayay durdurrada si uu uga dhuunto Set, halkaas oo uu isaga ku siiyay Awooddiisa go'aankiisa dhinacyo badan oo jidheed iyo maskaxeed. Waxaa xiiso leh in la xuso, hase yeeshe, taasi Ka bax inta badan waxaa lagu matalaa kor Heru ama dhabarkiisa sidii oo kale Yoda wuxuu ahaa dhabarka Luke.
- Yoda wuxuu soo xigtay: "Laga yaabo in ciidanku idinla jiro"
- Xoghayaha Aha ayaa yiri: "Muujinta awood u lahaan doonta"
Yoda waxay ku nooshahay meel goos goos ah oo u dhaw dabiiciga wixii ka dambeeyay dhicitaanka Golaha
Asalka Bisu waa kaymaha roobka iyo meelaha ciida
Yoda waxay ku hadashaa laxanka iyo qaabka heesaha oo lagu xasuusto dhaqamada Aborijiniska
Yoda waxay leedahay dhego aad iyo aad u balaaran iyo dabada oo cabirkeeda iyo midabka cagaaran ay ka tarjumeyso u dhawaanshaha Nature
Bes wuxuu matalaa Nature waxaana badanaa lagu matalaa dhegaha waaweyn iyo dabada.
Taasi waxay tidhi, waxaa jira mala awaal badan oo ah in Masters Jedi ay ku saleysan yihiin koox aqoonyahanno ah ama sayid u ah Djed, Keersameyaasha Aqoonta ee Kemet oo ku dhaqma cibaado sheegashada Djed oo tiirkoodu sidoo kale matalayo laf-dhabarka Ausar, sidoo kale waa wadada ugu weyn, marka nidaamka neerfayaasha dhexe ay dib ugu gudbiyaan farriimaha guud ahaan jirka intiisa kale
Waxaas oo dhan oo loo dhihi karo waxaa jira cilaaqaad aad u xoogan oo u dhexeeya dhinacyo gaar ah oo Bes iyo Yoda iyo in inta badan sheekooyinka halyeeyada ah ama sheekooyinku ay ku saleysan yihiin khuraafaadka ama astaamaha Afrika.
Sep27 03: 35